Nyanzvi munyaya dzezvehutano dziri kukurudzira veruzhinji kuti vasatevedzera kana kuteerera mashoko ari kunyorwa kana kutaurwa pamadandemutande akasiyana siyana akaita seFacebook, Whatsapp nemamwe arikuzivisa vanhu nezvemishonga iyo inonzi inokwanisa kurapa kana kudzivirira chirwere checoronavirus icho chauraya zviuru nezviuri zvevanhu pasi rose.
Muzvare Lorna Mandizha vanogara kuTynwald North kuWestgate vanoti vakatombogadzira mushonga wemandimu akasanganiswa nesoda kana kuti sodium bicarbornate pachirungu, vakatopa mhuri yavo kuti inwe mushonga iwoyu.
Muzvare Mandizha vanoti vakaudzwa nezvemushonga uyu nasahwira wavo uyo akabva auya nemandimu acho uye vakaverenga zvavaiva vatumirwa pambozhanhare kuti vadzidze mabikirwo emushonga wacho, asi vakatozoziva kuti mushonga uyu unogona kuuraya mhuri yose.
Mumwe mudzimai Amai Tee Chigodora vanoti vakapotsa vagadzirawo mushonga iwoyu asi havazive kuti chii chakavadzora sezvo varikugara vachingotya kubatira chirwere checoronavirus icho chinonzi hachina mushonga unochirapa.
Mutauriri weZimbabwe Hospital Doctors Association kana kuti ZHDA Dr Tapiwa Mungofa vanoti zvirwere zvinorapwa kunaana chiremba vakadzidzira basa racho kwete zviri kutaurwa nevanhu pamadandemutande.
Dr Mungofa vanoti mushonga wese unezvaunotokanganisa muviri wemunhu nokudaro vanhu vakangoteerera zvese zvese zvangotaurwa vanokwanisa kurasikirwa nehupenyu.
Vakapa muenzaniso wemumwe munhu akanwa mushonga unorapa malaria unonzi chloroquine angonzwa kuti unorapa coronavirus akabva atoshaya.
Dr Mungofa vakayambirawo vagari vekumaruwa nezvechirwere ichi vakavakukurudzira kuti vasaita nzendo dzekuenda kumadhorobha, kushanyira hama munharaunda dzavo uye nekuenda kunobata maoko kurufu nokuti chirwere ichi chinopararira zvakanyanya panenge pakaungana vanhu.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvehutano Dr Josephat Chiripanyanga vatsinhira mashoko aya vachiti vanhu ngavadzikise mikana yokubatira hosha iyi nekugara kumba uye vachigeza maoko nesipo nuva dzose uye kuti varegedze kubata kumeso, maziso uye nekutonongora mhino dzavo.
Dr Chiripanyanga vanoti mate anobuda mukanwa kana munhu achitaura kana kukosora ndiwo anotakura chirwere che corona virus nokudaro vanokurudzira vanhu kuti vasamira kana kugarisana padhuze kana vachitaura.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvehutano Dr Obadiah Moyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vange vasiri kudaira nharembozha yavo.